अरेडी अर्शुभाइ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर एशियाई फुटबल स्टोरीहरू अरेडी अर्शुभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
LB सर्वश्रेष्ठ फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वश्रेष्ठ नाम बाट ज्ञात गर्दछ; 'Shava'। हाम्रो आन्द्री अर्शुभाइ बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु पुरा खातामा ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। सुरु गरौं।
आर्यरी अर्शाभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-बाल्यकाल
अरेर्गे सेर्गेईभिच अर्गविन सेन्जेन अर्शाभिन (बुबा) र तात्ते अर्द्धवना (आमा) द्वारा 29 मई 1981 मा सेन्ट पीटर्सबर्गमा जन्मे।
उनी एक दुर्घटनाबाट बाँचेका थिए कि तिनलाई मारेका थिए जब उनी बच्चाको रूपमा कारबाट हिउँथे। जब उनी 12 हुँदा उनको आमाबाबुले विवाह गरे, यो एक समय थियो जसलाई उनीहरूलाई एकसाथ दुवैको साथ चाहिन्छ। उसको आमाको आफ्नै नतिजा छिनको लागी उनको आमा गरिब थियो। अरेडीले आफ्नो आमाको साथ छोटो फ्लैटको भुइँमा सुत्न थालिन्। उनीहरूको बचपनबाट सही फुटबल गर्ने उनको सपना थियो।
सौभाग्य देखि, उनको बुबा उसलाई सम्झना थियो र उसलाई उनको सपनों संग जारी राखन को मदद गर्न को लागि थियो। यो उनको बुबा थियो जसले उनलाई एक फुटबल खेलाडी बन्न असफल भएपछि फुटबलमा क्यारियरको पछि लागे।
अर्जेशभिनले प्रारम्भिक उमेरमा फुटबल खेल्न थाले र सात वर्षको उमेरमा। उनको पिताले उसलाई नामाकरण गरे सेमेन फुटबल अकादमी of Zenit, उनको गृहनगर क्लब। अशविनलाई आधारभूत रूपमा फुटबलमा ध्यान दिंदा अकादमीहरूले ठूलो प्राथमिकतामा विचार गर्थे। यसको कारण, उनले फुटबल एकेडेमी नजिकैको नजिकैको स्कुलमा भाग लिइन्। उनीहरूको पुस्तक पढ्न र एकैचोटि फुटबल खेल्नको लागि थियो।
उनीहरूको साथमा खेलको अभिनयमा महसुस गर्दा प्रगति भयो, फुटबलको लागि उनको प्रेम बढ्दै गएको छ जब शिक्षाको मूल्यवृद्धिको लागि। केही बिंदुमा, उनले अब अकादमीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेनन्। अकादमीहरु को लागि उनको उपेक्षा अक्सर खराब व्यवहार को कारण बन्यो।
अरेडीको अनुसार "मैले स्कूलमा खराब व्यवहार गरे। जब म दोस्रो कक्षामा थिएँ, मैले कक्षाको दर्ता पत्रिका छोडेको छु किनकि म कक्षाहरूमा भाग लिन चाहँदैनथे। यो यो घटना थियो जुन मलाई हटाइयो। "
उनको फुटबल साथीहरू सामेल हुन अकादमीमा फर्किनु थियो। उनी सबै भन्दा सानो बच्चा र कप्तान थिए। चाँडै उहाँ एक गृहनगर फुटबल नायक बन्नुभयो।
आर्यरी अर्शाभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-सारांशमा क्यारियर
अर्कविनले एक्स्टोरियल फुटबलमा अस्टस्टिन एक्सएनएनक्सक्स, एक्सएनक्सक्समा आफ्नो पहिलो स्थान बनायो। अहिल्यै, यो अंग्रेजी माटोमा भयो। जेएनयूएमएक्सएक्स-एभरेस्टले जेनेटको 2-2000 को समयमा विभेदित अण्ड्रे कोबेलेभलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्थानमा ब्राडफोर्ड सिटीमा जित्यो।
जवानलाई सेन्ट पीटर्सबर्ग टोलीको सुरुवात ग्यारहमा नियमित रूपमा अर्को वर्ष प्रतीक्षा गर्न थाल्छ। सबैले, उहाँले 71 लक्ष्यहरूको स्कोर र 100 सहयोगलाई रूसी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा 281 उपस्थितिमा जेनेटको साथ आठ सत्र बिताउनुभयो। उहाँ उनीहरूलाई उपनाम दिएका सेन्ट पेट फ्यानहरूका लागि एक नायक हुनुभयो "शव", र उत्तरी राजधानी देखि क्लब को वास्तविक प्रतीक।
उनलाई 2006 मा रूस को फुटबल प्लेयर नाम दिइएको थियो, तर यो अर्जेशभिन को अर्को दुई वर्ष क्लब संग - जब डच कोच डिक एडोकाट ले चार्ज गरे - जो सबै भन्दा सफल भयो।
उहाँले आफ्नो प्रारम्भिक वर्ष एफसी बार्सिलोनाको प्रशंसकको रूपमा र वास्तवमा उसले कातालान क्लबको लागि खेल्ने सपनालाई कहिल्यै इन्कार गरेन। यो शस्त्रागार थियो जसले आफ्नो हृदय चुरायो।
आर्यरी अर्शाभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-पारिवारिक जीवन
उहाँ एक साधारण कामकाजी वर्ग परिवारमा जन्मिए। उनको पिता सेर्गे अर्र्श्विन एक शौकिया फुटबलरको रुपमा खेले। टाटापे अर्ष्भिना रूसी फुटबल खेलाडी अन्डेरी अर्जुननाथको आमा हो। सर्गे अर्शाभिनले 40 उमेरमा हृदय विफलताको मृत्यु भएको थियो।
आर्यरी अर्शाभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-सम्बन्ध जीवन
Yulia Arshavina3जुन 1985 (उमेर 32) मा जन्मेको थियो आर्यो अर्शान पहिलो पत्नी तिनीहरूले 2004 मा विवाहित र 2013 मा तलाक दिए। आर्साभिनसँग तीन बच्चाहरू छन् - अर्सेनी अर्शान, आर्टेम अर्शान र छोरी याना आर्सावना उनको तलाक पछि, अशविन खाली भए। दुःखको कुरा, तीन बर्ष भन्दा बढीका लागि, तिनीहरूले लगभग संचार गर्दैनन् र उनीहरुका बच्चाहरु देखिनन्। यूलियाले उनलाई त्यसो गर्न सकेनन्। बरु, यो अशविन थियो जसले धक्का नगरेको थिएन। उहाँले मात्र पैसा र उपहार पठाउनुभयो।
यो सूचना दिइएको थियो कि3वर्ष पछि उनको तलाक पछि, अश्विनले फेरि विवाह गरे। उनको निर्णय आफ्नो बच्चाहरु संग आफ्नो बच्चाहरु संग दोबारा गरे पछि आए। उनले आफ्नो लामो समयको प्यारी एलिस कैटिमिनीसँग गाँठो बाँडे। प्रेमिका सेप्टेम्बर 1 मा, 2016 सेन्टि-पीटर्सबर्गमा विवाहित थिए।
यस समारोहमा एलिसको पहिलो विवाहका छोराछोरीहरू सहितका सबैभन्दा नजिकका व्यक्तिहरू पनि सहभागी थिए। समारोहमा अतिथिहरू थोरै दुलही र दुल्हन घरमै सबै चुपचाप गर्ने निर्णय गरे। यो पनि थाहा छ कि एलिस उनको नाम परिवर्तन भयो अरेविना.
आर्यरी अर्शाभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-एक फैशन डिजाइनर
अरुशविनले पनि प्रमाणपत्र र फैशन डिजाइनमा एक अभ्यास पाएका छन्।
आर्यरी अर्शाभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-एक राजनीतिज्ञ
2007 मा, उनले पार्टी संयुक्त रूस को लागि विधानसभा विधानसभा विधानसभाको लागि एक उम्मेद्वारको रूपमा चुनावमा भाग लिइन्। फुटबल खेलाडीहरूले चुनाव जिते, तर पछि आफ्नो जनादेशलाई दिए।
तिनको घटकले आफ्नो लक्जरी गाँउको नाम बदले "आर्साभ्का" पूर्व शस्त्रागार प्लेमकर पछि। यो उनीहरूको लागि प्रेमको परिणामको रूपमा थियो।
आर्यरी अर्शाभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-एक लेखक
एरिडी अर्शाभिन एक लेखक हो, जसले आफ्नो पुनरुत्थानमा तीन पुस्तकहरू छन्: "यूरो-2008। Guus र उनको टोली। आर्यो अर्शानन को डायरी "; "हामीले गर्यो! ठूलो विजयको कथा "; र "अरुणभिन, एक महिला, पैसा, राजनीति र फुटबलमा 555 प्रश्नहरू र जवाफहरू समावेश छन्।
आर्यरी अर्शाभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-दान
उहाँ पनि दान काममा संलग्न हुनुहुन्छ। आर्साविन नेन्ट सेन्ट पीटर्सबर्ग नजिकैको पुशकिन शहरमा एसओएस बालबालिकाको गाउँहरुको राजदूत बनने प्रस्ताव को स्वीकार गर्यो।